साथी बनाएर एक्लोपन हटाउनुहोस् | किशोरकिशोरी
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको इसोको ईवी उम्बुन्डु एफिक एस्टोनियन ओसेसियन किकाम्बा किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किरून्डी कोरियन क्रोएसियन क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार टिभ डच डेनिश तामिल तेलगु त्वी त्सोंगा थाई नर्वेली नेपाली पापियामेन्टो (कुरासाओ) पोर्चुगिज पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बुल्गेरियन भियतनामिज मल्यालम मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुगान्डा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सिंहला सिबेम्बा सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
१. आफूमा भएका राम्रा गुणहरूमा ध्यान दिनुहोस्। (२ कोरिन्थी ११:६) हामीमा थुप्रै कमीकमजोरी छन्‌ तर केही न केही राम्रा गुणहरू पनि छन्‌। राम्रा गुणहरूमा ध्यान दिनुभयो भने आफूबारे आउने नकारात्मक सोचाइ र एक्लोपन हटाउन सक्नुहुनेछ। आफैलाई सोध्नुहोस्, ‘ममा के-कस्ता राम्रा गुणहरू छन्‌?’ आफ्नो खुबी र असल गुणहरूबारे विचार गर्नुहोस्।
२. अरूलाई चासो देखाउनुहोस्। सुरुमा एक-दुई जनालाई चासो देखाउने कोसिस गर्नुहोस्। होर्ह नाम गरेका युवक बताउँछन्‌, “ कसैलाई साथी बनाउन हालखबर बुझ्नु अथवा काम कस्तो हुँदै छ भनेर सोध्नु मात्र पनि पर्याप्त छ। ”
तपाईं र साथीहरूबीचको दूरी हटाउन पुल बनाउनुहोस्
सल्लाह: सधैं आफ्नै उमेरका साथीहरूसित मात्र सङ्‌गत नगर्नुहोस्। बाइबलमा असल साथीहरूको थुप्रै उदाहरण पाइन्छ। जस्तै: रूथ र नाओमी, दाऊद र जोनाथन अनि तिमोथी र पावल। (रूथ १:१६, १७; १ शमूएल १८:१; १ कोरिन्थी ४:१७) हुन त तिनीहरूको उमेर धेरै फरक थियो तर तिनीहरू घनिष्ठ साथी थिए। यो कुरा पनि मनमा राख्नुहोस्, कुराकानी दुईतर्फी हुन्छ, एकतर्फी होइन। त्यसैले एक जनाले बोल्दा अर्कोले ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। तपाईंलाई कुराकानी गर्न लाज लाग्छ भने अरूको कुरा ध्यान दिएर सुन्न सक्नुहुन्छ।
३. “ एकअर्काको पीडा महसुस ” गर्नुहोस्। (१ पत्रुस ३:८) बाइबलको यो सल्लाहमा बताइएजस्तै हामीले एकअर्काको भावना बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। तपाईंलाई साथीको कुरा मन परेन भने पनि बोल्न हतार नगर्नुहोस्, तिनको कुरा ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। दुवै जना सहमत हुन सक्ने विषयमा कुरा गर्नुहोस्। चित्त नबुझेको कुरा बताउनै पर्छ जस्तो लाग्छ भने शान्तपूर्वक र विचार पुऱ्याएर बताउनुहोस्।
सल्लाह: अरूले आफूसित जसरी कुरा गरेको चाहनुहुन्छ, त्यसरी नै कुरा गर्नुहोस्। सानोतिनो कुरामा निहुँ खोज्ने वा जिस्काउने, खिसी गर्ने अथवा आफ्नो कुरामा जिद्दी गर्ने मान्छेलाई कोही पनि साथी बनाउन चाहँदैनन्‌। तर जसको ‘ बोली सधैं दयालु हुन्छ ,’ उसलाई सबैले साथी बनाउन चाहन्छन्‌।—कलस्सी ४:६.
युवा जनहरूका प्रश्न—कसरी साँचो मित्र बनाउने